"मंगलम" र "छक्का पन्जा २" को कसरी सहमती भयो , यसो भन्छन दीपक राज गिरी (भिडियो सहित) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment“मंगलम” र “छक्का पन्जा २” को कसरी सहमती भयो , यसो भन्छन दीपक राज गिरी (भिडियो सहित)
“मंगलम” र “छक्का पन्जा २” को कसरी सहमती भयो , यसो भन्छन दीपक राज गिरी (भिडियो सहित)
September 11, 2017 Keshab Khadka Entertainment, Kollywood, News, Videos 0
दिपाश्री निरौलाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र “छक्का पन्जा २” “मंगलम” सँग भिड्ने कुराले गत हप्ता ठुलै चर्चा पायो । तर चर्चा चुलिन नपाउदै मंगलम टिम र छक्का पन्जा २ टिमले मिटिङ राखी यो चर्चालाई चर्चामै सिमित गराइदियो । “मंगलम” ले रिलिज मिती सारेपछी निकै नै प्रतिक्षित चलचित्र “छक्का पन्जा २” ले सोलो रिलिज पाएको हो ।मंगलम टिम र छक्का पन्जा २ को आपसी सहमती मा छबी ओझाले रिलिज मिती सरेका हुन ।
कसरी सर्यो त मंगलमको रिलिज मिती ? यो बारेमा हामीले छक्का पन्जा २ का नायक दीपक राज गिरिलाई प्रश्न सोधेका थियौ हेर्नुहोस भिडियो अन्तर्वाता:
जुध्यो “क्री” “कान्छी” र “शेरबहादुर” को रिलिज मिती, कसले मार्ला बाजी!!
सांगीतिक क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नुनै मेरो जिबनको लक्ष्य हो- गायिका रेश्मा पुन